Bilow ama dadka kale ee ka desktop-ka laga badiyay bin recycle waxay keeni kartaa argagax. Si kastaba ha ahaatee, waxaa caadi ah in ay lumiyaan bin recycle laakiin seenyada loo xaaladda ugu xun waxaa laga badiyay files qiimo leh. Waxaa jira dhowr hab-dhaqannada caadiga ah oo keeni kara in ay lumiyaan ee recycle bin iyo files ee Recycle Bin. Marka aad u baahan tahay desktop nadiif ah, aad si qalad ah ka saari kara bin recycle ka desktop sidan icon ku qarsoonna ma jiro. Sidoo kale marka la tirtiro qaar ka mid ah faylasha loo baahnayn ka bin recycle ah, aad tirtirto laga yaabaa in qaar ka mid ah files muhiim ah oo kaliya in ay soo daahay ay ogaadaan. Munaasabada kale, nidaamka qalliinka musuqmaasuq waxay keeni kartaa in ay lumiyaan faylasha in recycle ah.
Waxa ka muhiimsan, icon recycle bin la karaan dib u desktop soo celiyay. Waxaa intaa dheer, faylasha lumay ka bin recycle weli la soo kabsaday karaa qaab asalka ah si ay meel hore oo isticmaalaya software saxda ah soo kabashada xogta.
Sida loo sameeyo Recycle Bin soo laabto on Desktop ah
Recycle bin Your laga yaabaa inay tirtirmaan ka desktop ay sabab u tahay tiro ka mid ah arrimaha soo socda. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay fayras, aftermarket qalab nadiif ah ama tirtirka shil ka saari karaan. Yididiiladda; aad u soo kaban karto, in ay goobta asalka ah. Waxaa jira dhowr talaabo oo la qaadayo si ay u sameeyaan mar kale soo laabto.
Riix menu bilowga ah ee aad bar hawsha
Tani waa tallaabooyinka aasaasiga ah ee loogu talagalay dadka Vista daaqadaha.
Dadka la Windows 8 iyo Windows 7, Waxaa lagaaga baahan doonaa in aad ka raadin markaas u walxood desktop ka hor tagaan in ay doortaan show ama qarin walxood oo caadi on desktop. Waxaa ka dib markii aad sii wadan doonin tallaabada 4
Guddi gacanta Select
Waxaa jira guddi ay gacanta ku saabsan xaq, guji ku yaal oo sug qaababka kale oo loo soo bandhigay. Waxaad arki doonaa sida tani u muuqataa.
Laga soo bilaabo muuqaalka iyo shaqsinimo, u tag shakhsiyeeyo on xaqa aad u leedahay. Waxaad baari doonaa sida tani u muuqdaan on your computer.
Tag in la beddelo walxood desktop
Sanduuqa wadahadal A ka muuqan doontaa dhinacaaga gacantiisa midig. Waxaad arki doontaa wax isbedel ah desktop icon muuqan, guji ku yaal.
Dooro recycle bin
Tag in la beddelo desktop sanduuqa icon ka dibna dooro bin recycle ku darto si aad desktop aad doorato. Halkan waxa aad ku arki doonaa shaashadda sidaan oo kale ah
Waxaad dooran kartaa bin recycle buuxa ah ama mid madhan. Waxa kale oo jira bin icon sanduuqa wadahadal isbedel recycle ah kaliya haddii ay dhacdo aadan jeclaan icon hore.
Sida loo helay tirtiray Faylal ay ka Recycle Bin
Haddii aad si qalad ah la tirtiro files muhiim ah, ma jiro keeni digtoonaanta. Recycle bin ayaa weli ay faylasha aad Sidaa darteed; waa ay fududahay in iyaga la soo celiyo suuqa kala. Laakiin haddii aad sii tageen inay soo daataan bin recycle ah, waxaad ka heli doonin faylasha aad ee Recycle Bin sidaas waxaad u baahan tahay software kabashada file in ay dib u hesho. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud dib u soo ceshano files tirtiray ka recycle ee suuqa
Marka hore, click double on icon recycle bin in la furo. Markaas aqoonsado dooro dhammaan faylasha ee aad u baahan tahay dib loo soo celiyo. Ka dib markii in, ka dooro meesha ku haboon meesha aad rabto faylasha aad soo Celinay ku yaalaan. Xaqa guji meesha ka dibna riix celin. Is daji, aad files karaa hadda loo soo celiyo oo waxaad ka heli doontaan meesha aad dooratay. Waqtiga ay qaadato in la soo celiyo files ku xiran tahay xawaaraha computer iyo baaxadda faylasha loo soo celiyay.
The Best Data Recovery kabashada Tool-Wondershare Data
Shaqsiyaadka iyo xataa shirkadaha ka Cabsada badiyay xogta muhiimka ah. Currently, macluumaadka ugu badan waxa lagu kaydiyaa si kastaba ha ahaatee kombiyuutarada; warbixin sida aan caadi ahaan xoojiyaa. Oo sidaas waa khasaaraha ka mid ah macluumaadka muhiimka ah waxay keeni kartaa argagax halis ah ka mid ah dadka isticmaala ay. Si la nooc ka mid ah xaaladaha ka qabtaan, tiro ka mid ah qalabka soo kabashada xogta la been abuurtay. Haddii aad raadinayso software ugu hufan oo tayo sare, mar dambe ma aad eegto.
Wondershare Qalab kabashada xogta waa aalad cabsi badan u soo ceshano nooc kasta oo xogta laga badiyay. Laga soo bilaabo storage devices sare (oo ay ku jiraan oo aan ku xaddidnayn drives adag, flash drives, kaarka SD) in telefoonada gacanta si ay kamaradaha digital. Software Tani waa user saaxiibtinimo iyo bilowga ah ama lagu bilaabo u isticmaali kartaa si dhib la'aan. Waxa kale oo uu leeyahay interface wanaagsan taas oo kuu sahlaysa user ay u maraan mar kasta oo u baahan.
Software soo kabashada waxaa loogu talagalay si ay ugu adeegaan dhammaan dadka isticmaala tixgelinayo xirfadaha kombiyuutarka. In in ay jiraan laba nooc oo ah utility soo kabashada; saaxir iyo hab caadiga ah. Hab Wizard waxaa si gaar ah loogu tala galay shakhsiyaadka aan wax badan xirfadaha kombiyuutarka inuu ka soo kabsado xogta lumay. Hab caadiga ah waxaa loogu tala galay dadka isticmaala sare. Wuxuu ka kooban yahay afar qaybood soo kabashada; kabashada badiyay file, soo kabashada resume, soo kabashada xijaab iyo soo kabashada file cayriin.
Sida loo soo ceshano Data Isticmaalka Wondershare Software Recovery File
Dooro noocyada file aad rabto in aad soo kabsadaan ka
Halkan waxaa looga baahan yahay in aad dooratid noocyada faylasha aad rabto in aad la raadsan Waxa ay noqon sawir, emails, Cajalado ama video. Waxa kale oo aad dooran kartaa doorasho oo dhan, haddii ay doonayaan oo dhan files lumay in la soo kabsaday. Kaalay yihiin si wixii aad rabto in aad sii wado in tallaabo ee soo socda.
Dooro meesha faylasha tirtiray halkaas oo markii hore la tirtiro
Halkaa marka ay marayso, dooro meesha aad horay loogu tirtiray alaabta. Dooro bin recycle haddii aad ka shubeen recycle ah. Haddii aadan qaar qasaaraha xogta ka dhacay, sidoo kale waxaad dooran kartaa kombiyuutarka sida goobta si ay awood qalab dib u soo kabashada soo ceshano faylasha aad.
Dooranaysaa soo socda in la sii wado in tallaabada xigta.
Inaad doorato awood scan qoto dheer
Sahlo baaritaan qoto dheer in la siiyo qalab kabashada fursad ugu sareeya ee soo kabsaday oo dhan files lumay. Geedi socodka qaadan kartaa dhawr daqiiqo la siiyey tirada faylasha loo baahan yahay in la marsiiyey. Door bilaabaan in ay bilaabaan nidaamka qoto dheer scan.
Kabsado files tirtiray
Ka dib markii raajo la dhamaystiro, maraan dhammaan noocyada ka bogsaday files. Markaas riix scan (si uu u hubiyo qalab kasta oo laga keeno) iyo badbaadin. Deep iskaanka seego inuu ka soo kabsado files lumay. Taasi waa sababta iskaanka qoto dheer lagu talinayaa.
Hel kuu gaar ah codsiga Wondershare Data Recovery maanta si looga fogaado rush daqiiqadii ugu dambeysay oo argagax markii qasaariyeen xog muhiim ah in aad computer.
> Resource > Ladnaansho > Habka ugu fiican in la soo celiyo aad recycle bin